Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba kunye neehotele » Iindawo ekuchithelwa kuzo iiSandals Resorts zihamba phambili ngokuQinisekiswa kweeholide
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukwaphula Iindaba zeJamaica • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Caribbean • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeLuxury • iindaba • Resorts • Tourism • Iindlela zokuHamba | Iingcebiso Zohambo • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
Isiqinisekiso seholide seembadada
I-Sandals Resorts International (i-SRI), inkampani engumzali weCaribbean ehamba phambili kuyo yonke into ebandakanya zonke iiarhente zeendawo ekuchithelwa kuzo iiholide iiSandals Resorts kunye neelwandle Resorts, ibhengeze ukwaziswa kweSandals Vacation Assurance, eyona nkqubo iphambili yokukhuselwa kweeholide enomzi-siqinisekiso sokuqala simahla. Ukuthatha indawo yeholide kubandakanya indleko zomoya zeendwendwe ezichaphazelwe kukuphazanyiswa kukhenketho lwe-COVID-19.
Iindwendwe zeeSandals Resorts kunye neelwandle Resorts zinokubhukisha ngaphandle kwexhala ngokukhusela inqwelomoya, indawo yohambo yasimahla engalindelekanga, kunye nokunye.
Inkqubo isusa ixhala kuhambo kwaye iqinisekisa iindwendwe ukuba utyalomali lokuhamba lukhuselekile.
Ukubhuka okwangoku kunye nokutsha okwenziwe ngoku nge-31 kaDisemba ka-2021, yokuhamba de kube ngu-Disemba 31, 2022, bafumana ngokuzenzekelayo iiSandals kunye noKhuseleko lweeNdawo zokuKhuselwa kweeholide.
NgokukaSihlalo weSigqeba se-SRI u-Adam Stewart, iNkqubo entsha yokuQinisekiswa kweeNdawo zokuHamba ngeembadada yenzelwe ukuba isuse uxinzelelo kuhambo, inike iindwendwe isiqinisekiso sokuba utyalo-mali lwazo iholide yonke ebandakanya konke ikhuselekile kwiziphazamiso ezingaphandle kolawulo lwazo.
“Sifuna ukubeka uyolo novuyo ekucwangciseni nasekulindeleni iholide enkulu ukuba ibuyele kuhambo. Ngelixa siqonda ezona nkxalabo zinokubakhathaza iindwendwe zethu, sithatha amanyathelo angaqhelekanga okususa ixhala kubalo, ukuze abahambi bonwabe kulo lonke uhambo lokuhamba-ukusuka ekubhukeni nasekuhambeni, utshilo uStewart.
Lonke ugcino lwangoku nolutsha olwenziwe ngoku nge-31 kaDisemba, 2021, yokuhamba de kube ngu-Disemba 31, 2022, ziya kufumana ngokuzenzekelayo iiSandals kunye neLwandle lokuKhuselwa kokuQinisekiswa kweeholide.
Izibonelelo zeSandals kunye neelwandle Inkqubo yokuQinisekiswa ngeeholide:
Ngaba i-Delta Plus yahlukile kwi-Delta eyahlukileyo ...
I-Itali yoKhenketho e-Itali ekugqibeleni ibuyile ithi Mongameli we-BMT
IRashiya iphinda iqale i-US, i-Itali, iBelgium, iBulgaria, neJordani ...